कहिले आउला चार महानगरको परिणाम ? « Light Nepal
कहिले आउला चार महानगरको परिणाम ?
लाइट नेपाल काठमाडौं, ५ जेठ । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाको अन्तिम परिणाम आउन अझै एक साता लाग्ने देखिएको छ । निर्वाचन भएको ५ दिनमा चारवटै महानगरपालिकाको एक चौथाइ पनि मतगणनाको काम सम्पन्न नभएपछि अझै कति दिन कुर्नुपर्ने हो भन्ने अन्योल देखिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
निर्वाचन आयोगले एक सातामा चारवटै महानगरपालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने गरी गणनाको काम अघि बढाएको बताए पनि त्यसअनुसारको गणना हुनसकेको छैन । काठमाडौंलगायत महानगरपालिकामा ११ वटासम्म टोली बनाएर गणनाको काम भए पनि ढिलासुस्ती हटेको छैन ।
‘महानगरपालिकाको परिणाम आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, ‘काम गर्दागर्दै पनि ढिला हुने देखिएको छ ।’ आयोगले एक साताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको शर्माले बताउनुभयो । चारवटै महानगरपालिकामा एक लाख पचास हजारभन्दा बढी मत खसेको छ ।
महानगरपालिकाको मत गणनामा लागेको समयले दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीलाई भने असर नपार्ने शर्माले बताउनुभयो । ‘पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणनाले दोस्रो चरणको निर्वाचन सहज बनाउनेछ’, शर्माले भन्नुभयो, ‘दोस्रो चरणको मतदानमा मतपेटिका पुग्नेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै टोली बनाएर गणना सुरु गर्ने सोचाइमा छौं ।’
तीन प्रदेशका दुई सय ८३ स्थानीय तहमा गत आइतबार निर्वाचन भएको थियो । चारवटा महानगरपालिकाबाहेक अधिकांश तहको मतगणनाको नतिजा प्रकाशित भइसकेको छ । आयोगका अनुसार पहिलो चरणको मत परिणाममा एमाले अग्रस्थानमा देखिएको छ । एमालेले ९० र कांग्रेसले ८१ तहमा निर्वाचन जितेका छन् । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले ३८, राप्रपा १ र नयाँ शक्तिले एक तहमा विजयी हासिल गरेका छन् ।